रघुजीलाई कोमल वलीको प्रश्न : महिला नेतृहरु को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो ? – Nepali Janata Khabar
रघुजीलाई कोमल वलीको प्रश्न : महिला नेतृहरु को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो ?
आईतवार १६ फाल्गुन, २०७७
काठमाडौं – कोमल वली यसपटक रघुजी पन्तविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइन् । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तलाई निच सम्म भनेकी छिन् ।
पन्तले महिला नेतृहरु पिंडुला देखाएर पदमा पुग्न सफल भएको अभिव्यक्ति दिएपछि वली आक्रामक बनेकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा पन्तको नामै तोकेर लेखेकी छिन्।
हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदोरहेछ भन्ने बल्ल आएर खुलेको छ । उनले पन्तलाई महिला नेतृहरु को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो ? भनी प्रश्न गरेकी छिन् ।
वलीले लेखेकी छिन् : हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदाे रहेछ भन्ने बल्ल आएर खुलेकाे छ । पन्तजीलाई मेराे प्रश्न : तपाईकाे पार्टीमा कुनै पदमा रहनु भएका महिला नेतृहरुले काे कसलाई पिंडुला देखाएर त्याे स्थानमा पुग्नु भएकाे हाे ?
के याे देशमा महिलाले कुनै काम गर्न, कुनै पदमा पुग्न र सफलता हासिल गर्न तपाईकाे जस्ताे दरिद्र साेचकाे सिकार हुनुपर्छ ?पत्नविरुद्ध उनी लगातार आक्रामक हुने क्रममा आमा दिदीबहिनी सबैको अपमान गरेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
वलीले लेखेकी छिन् : पुर्वीया दर्शन देखि मानव विकासमा महिलाको उच्च सम्मान समाजको कसिमा उत्तीर्ण भएर भएको छ । प्रकृतिले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको हो ।
एकअर्काको आदर सम्मान विना समाजमा न्याय समानता र विवेकशीलताको अन्त हुन्छ । समाज हिंसा तिर जान्छ र दया करुणा जस्ता कुरा हराउँछन् । तसर्थ एकले अर्कालाइ सम्मान गर्नु जीवनलाई मर्यादित र सरल बनाउनु हो ।
तर नेकपाका नेता रघु पन्तले महिलाहरुले प्राप्त गर्ने पदहरु पिंडुला देखाएर भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ वहाँको मानव बिकासका क्रममा बन्ने तन्तु हरु विचैमा रोकिएको जस्तो छ ।
वहाँले प्रयोग गर्ने शव्दहरुले आफ्नो आमा दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको छ । विवेक हिन मानिसको आलोचना ले आफैलाई आलोचित गर्दछ यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र समाजको दुर्घटना कति टाढा होला ?
खुसिको खबर नयाँ वर्षमा एनसेलको डबल योजनाः डाटा प्याकमा भोलुम, हरेक रिचार्जमा बोनस
युवा नेता इन्द्रराम यादव द्वारा नयाँ बर्ष २०७८ साल काे शुभकामना
प्रधानमन्त्री ओलीले भाेलि नयाँ वर्षका दिन देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
टिकटक झन्झन् बन्दै गयो लोकप्रिय, महिनामै ६ करोड डाउनलोड हुन थाल्यो
मंगलवार ३१ चैत्र, २०७७